मनाङ, २८ वैशाख । माओवादी युद्धकालदेखि नै विस्थापित भई मनाङ छिरेका रुकुमका सत्य पुनमगर जंगलमा बसेको धेरै बर्ष भइसक्यो ।
“गाउँमा कोठा लिएर किन नबसेको ?” भनी प्रश्न गर्दा मगर भन्छन्, “गाउँमा बसेर के गर्ने ? हाम्रो काम वनमा नै हुन्छ । गाउँबाट यहाँसम्म आउन दुई दिन लाग्छ, समयको बर्बाद हुन्छ, त्यसैले हामी यहीँ बस्छौँ ।”
तपार्इं घर जानु भएको छैन ? भन्दा उनि भन्छन्, “१० वर्ष त गइन, अहिले दशैँमा गएको थिएँ । आफन्तले नै चिनेनन्, अनि फर्किएँ । मेरो घर भनेको यही वन हो र मेरा आफन्त नै यिनै रूख हुन् । यिनैले खाना दिएका छन्, लाउन दिएका छन् । मलाई यसैमा खुशी छ । यहाँका ढुङ्गा, माटो, रूखबिरुवा सबैले चिनेको छ ।”
यसरी जंगलमा कहिलेसम्म बस्ने त ? भन्दा उनि भन्छन्, “बाँचुन्जेल र हातगोडा चलुन्जेल बस्छु । मरेपछि जेहोला होला ।” अहिले उनीसँग रोल्पाका काले बुढामगर साथी छन् । दुवैजना यही छप्रोमा बसेर काठको काम गर्दै आएका छन् । यसरी माओवादी जनयुद्धसँगै गाउँ छाडेका कयौँ सत्य पुनमगरहरु कुनै न कुनै पीडा बोकेर हाकु लेकको जंगलमा बास बस्न बाध्य छन् । राससका लागि नविन लामिछानेको रिपोर्ट
२०७५ बैशाख २८ शुक्रबार ११:३३:०० मा प्रकाशित